Toyota Celsior 2003 (#637359) ကို Kamaryut ၿမိဳ့နယ္တြင္ေရ... | CarsDB
Lot Number: #637359
** ရန်ကုန်လိုင်စင် လူနံမည် အမည်ပေါက် အိမ်စီးကားသန့်သန့်ကောင်းကောင်းလေး**
ရောင်းဈေး	-	400 L	သိန်း
UCF31-0050625 , 2003Model, 4300CC,
Black Color , 106000Km
Car No.	-	9K/…. (YGN)
အိမ်စီးကားသန့်သန့်ကောင်းကောင်းလေး အတိုက်အခိုက်လုံး၀မရှိ *
*** လိုင်စင်(၂)နှစ်စာသက်တမ်းတိုးပြီး (2လပိုင်း 2020)ထိ ၊ 2003 မော်ဒယ် late 2004 မော်ဒယ်ရုပ် ***
ဆက်သွယ်ရန်	-	ကိုမျိုးထွန်း
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) High Grade Image Co, Ltd မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Toyota Celsior 2003 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။
နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ထားသည့်အချိန် ၁ နှစ်ကျော်